साउदीमा आज पनि २६ सय संक्रमित उपचारपछि घर फर्के -
साउदीमा आज पनि २६ सय संक्रमित उपचारपछि घर फर्के
कोरोना निको हुनेको कुल संख्या एक लाख २४ हजार ७५५
१४ असार २०७७, आईतवार १९:३२ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा आइतबार २ हजार ६२७ जना कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएका छन् । उक्त संख्यामा निको भएको यहाँ दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरी साउदी स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. मोहम्मद अल अब्दुलीले जानकारी दिएको हो ।
प्रवक्ता डा. अब्दुलीका अनुसार हालसम्म एक लाख २४ हजार ७५५ जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् ।
त्यसैगरी आज साउदीमा ३ हजार ९८९ जना कोरोना नयाँ संक्रमित थपिएको प्रवक्ता डा. अब्दुलीले बताए । उनका अनुसार साउदीभर कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित हुनेको संख्या एक लाख ८२ हजार ४९३ पुगेका छन् । साउदीका विभिन्न अस्पतालहरुमा ५६ हजार १८७ जना कोरोना बिरामीको बिशेष उपचार भइरहेको डा. अब्दुलीले जानकारी दिए ।
आइतबारको अपडेटअनुसार कोरोना उपचारपछि निको हुनेको संख्याभन्दा नयाँ संक्रमित १ हजार ३६२ बढी छन् ।
यहाँ कोरोना भाइरसको उपचार गरिरहेका ४० जनाले आज ज्यान गुमाएका छन् । साउदीभर कुल मृत्यु हुनेको संख्या १ हजार ५५१ जना पुगेको डा. अब्दुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न अस्पतालमा कोरोनाको उपचार गरिरहेकामध्ये २ हजार २७७ जना गम्भीर अवस्था रहेका छन् ।
हालसम्म साउदीको राजधानी रियादमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित ११ हजार २८४ पुगेका छन् । त्यस्तै यहाँको ठुला शहरहरु मक्कामा ५ हजार ३८५, दमाम ५ हजार ३००, जेद्दा ३ हजार ९३०, अल कातिफ ३ हजार ५०, खोबार २ हजार ५८०, हफुफ ३ हजार १०, तैफ २ हजार १५९, मदिना १ हजार ८५७, खमिस मुसायत १ हजार ६७५, अल मुबराज १ हजार ३३३, दहराइन १ हजार १३७ र आभामा १ हजार ८६ जना रहेका छन् । अन्य शहरहरुमा भने कोरोना संक्रमित हजारभन्दा तल रहेको जनाइएको छ ।
•साउदीमा एक लाख १३ हजार संक्रमित निको, छुट्टी गएकालाई कोरोना सकेपछि फर्काउने
•साउदीमा ७० प्रतिशतले जिते कोरोना, स्वदेश फर्कन चाहेमा शुल्क नलाग्ने